उपमेयर लक्ष्मी गाैतमकाे सनसनीपूर्ण खुलासा: - Saptakoshionline
उपमेयर लक्ष्मी गाैतमकाे सनसनीपूर्ण खुलासा:
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १७, २०७७ समय: ४:२५:५८
इटहरी / काेराेना भाइरसकाे संक्रमण विश्व भर अहिले पनि तिव्र रूपमा बढि रहेकाे छ । नेपालमा समेत यसकाे संक्रमण फैलिरहेकाे छ । सुनसरीकाे इटहरीमा दैनिक रूपमा संक्रमण फैलिरहेकाे छ । याे समयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले यसकाे नियन्त्रणकाे प्रयास गरिरहेकाे छ । काेराेना नियन्त्रणका लागी इटहरीकी उपमेयर लक्ष्मि गाैतमले गरेका कामहरूले विभिन्न चर्चा पाउने गरेकाे छ । नेपालमा संक्रमण देखिएकाे सुरूकाे अवस्थामा क्वारेन्टाइन निर्माण देखिनै चर्चामा अाएकी गाैतम पछिल्लाे समय संक्रमितलाइ घरघरमा पुगेर भट्ने देखि गुर्जाे संकलन गरेकाे कुरामा चर्चामा छिन् । त्यसै गरी केहि दिन पहिले उनी सँग जाेडिएर एउटा भिडियाे सर्वजनिक भएकाे छ । उनले सेटिङमा अाफ्ना मान्छे राख्न खाेजेकाे अाराेप लगाउदै भिडियाे सार्वजनिक गरिएकाे छ । उनले भने त्याे अाराेपकाे खण्डन गरेकी छन् । यिनै बिषयमा केन्द्रित भएर इटहरी उपमहानगर पालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गाैतम सँग गरिएकाे अन्तरवार्ताकाे संपादित अंश ।
इटहरीमा काेराेना महामारी कुन अवस्थामा छ ?
हामिले परिक्षण गरेकाे संख्या हेर्दा र समुदायमा गरिएका नमुना परिक्षणमा समेत संक्रमण देखिएकाले बाहिर अाएकाे रिपाेर्ट भन्दा संक्रमणकाे बढि संख्यमा छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपयले परिक्षण गर्न डराएकाे अवस्था छ, काँहि हामि पुग्न सकिरहेकाे अवस्था छैन् । त्यसैले अवस्था देखिए भन्दा जटिन नै छ । नियन्त्रण गर्न कठिन छ ।
पहिलाे कुरा हामि परिक्षण बढाउने काममा केन्द्रित भएका छाै । अहिले दुइ वटा समुहलेकाे परिक्षणालाइ तिव्रता दिएकाे छ । त्यस्तै अहिले अाइसाेलेशन निर्माणकाे काम भइरहेकाे छ । करिब एक हप्तामा इटहरीमा १०० बेडकाे सुबिधा सहितकाे अाइसाेलेशन तयार हुनेछ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाइ राख्न गरि त्यहि मापदण्डकाे अाइसाेलेशन निर्माण भइरहेकाे छ । समुदायमा अझै पनि काेराेना महामारीलाइ नबुझेकाे अबस्था छ । हामि जनचेतनाकाे काममा पनि लागि रहेका छाैँ । हामि हाम्राे स्राेत साधनले सकेकाे गरिरहेका छाैँ ।
इटहरीले अाफ्नै पिसिअारा मेसिन खरिद गर्ने बिषयमा के साेचिरहेकाे छ ?
हामि अहिले पिसिअार मेसिन खरिद गर्ने तयारीका छैनाैँ । परिक्षण नै उपाचार पनि हैन् । अहिले परिक्षण गरिरहेका ल्यावले तपाइहरूले पठाएकाे नमुना परिक्षण गर्न सक्षम छाै भनिरहेका छन् । त्यसैले अहिले त्याे अावश्यक पनि नहाेला । भाेलि अावश्यक परेछ भने नगरपालिका त्यसका लागि पनि तयार नै छ तर अहिले कुनै तयारी छैन् ।
मलाइ बदनाम गराउने नियतका साथ इडिट गरेर त्याे भिडियाे बाहिर अाएकाे हाे । सरूवा भएका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाेले जाने बेलामा काेराेना महामारीले स्थगित भएकाे परिक्षा संचालन गरेर अाफ्ना मान्छे राख्न खाेजेका रहेछन्, त्याे मैले हुन नदिएकाे हाे । मेराे भनाइ यत्ति हाे कि १५ बर्ष देखि कार्यरत कर्मचारीहरु निकाल्ने र सेटिङ मा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने योजना रहेछ त्याे सफल हुन दिइन् । मैले एक कर्मचारीलाई उपप्रमुखको नाताले जो हिजो देखि यहाँ दुख गरेर भोलिन्टिएर गरेर काम गरिरहेका कर्मचारी छन तीनलाई निकाल्न पाइन्न तिनीहरु पर्नु पर्छ भनेकी छु । गलत काम आफू नगर्ने र अरुलाइ पनि गर्न नदिने तपाईंहरु माझ मा जुन प्रतिबद्धता गरेकी थिए त्यसै को एक नमुना हो ।